Kedu ihe bụ fjords Norwegian? | Akụkọ Njem
All ndị m maara na-cruised na ndi norweji fjords ọ lọtawo na-eju anya. Nature na otu n’ime ngosipụta kachasị mma na egwu. Ma Kedu ihe bụ fjord, kedu ka esi kee ya, kedu njirimara ndị o nwere, ole ka ha dị, olee ndị anyị nwere ike ịga leta?
A zara ajụjụ ndị ahụ niile taa n’isiokwu a pụrụ iche na fjords ndị Norway. Travelga njem!
1 Ndị fjords
2 Ndị Norwegian fjords
3 Fjords na ndị ọzọ
Nke mbụ, ọ bara uru ịkọwa n'ụzọ ziri ezi ihe fjord pụtara: ọ bụ warara, osimiri gbara osimiri okirikiri a kpụrụ mgbe ndagwurugwu gwuru kpamkpam ma ọ bụ ọkara site na mmiri glacier. Nke ahụ bụ ịsị, asụsụ ndị na-am ị mmiri ka ọtụtụ narị afọ nọ na-akpụzi ala ahụ. Mmiri ahụ, mgbe ọ ruru okpomọkụ na-ekpo ọkụ, na-emepụta ọtụtụ mgbawa ma na-eme ndagwurugwu na-asọ oyi nke dị ka leta U. Otu akụkụ dị n'elu mmiri na nke ọzọ n'okpuru ya.
Fjords n'ozuzu ha dị omimi miri emiHa nwere ike ịdị ihe karịrị otu puku mita, na-edebanye aha omimi dị n'akụkụ akụkụ nke ụsọ oké osimiri. A na - ahụ Fjords ebe enwerebu glacier yabụ na ọ bụghị na ha nọ n'akụkụ ụwa niile mana na mpaghara dị elu, dị elu karịa latitude 50 na mgbago ugwu na site na latitude 40 na mpaghara ndịda. Na Norway, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na Chile, n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa.
N'ikpeazụ, a maara akụkụ nke fjord nke chere ihu n'oké osimiri dịka "ọnụ nke fjord", akụkụ dị n'ime ya bụkwa ala nke oké osimiri ahụ. Ọ bụrụ na ọdịdị mbara ala sara mbara karịa ka ọ dị ogologo, ọ bụghị fjord kama ọ bụ ọdụ mmiri ma ọ bụ akwa. Fjords ahụ dị jụụ ma ọ bụ na ọ dị n'ihu ogwe aka nke glacier ochie, a na-etinye okwute na ajịrịja na ájá na oge na-aga kpụrụ ihe mgbochi ụgbọ okpuru mmiri. Njirimara a agbanweela fjords n'ime eke ọdụ ụgbọ mmiri.
Extrafọdụ data ọzọ: UNESCO gụnyere fjords abụọ Norwegian na ndepụta nke World Heritage saịtị na ekele maka Ọwara Mmiri na ikuku nke ikuku nke nsonaazụ coriolis mepụtara, ihu igwe dịtụ mma na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị ice.
Ndị Norwegian fjords
Norway nwere ọtụtụ fjords, ụfọdụ ama karịa ndị ọzọ. Anyị nwere ike ilekwasị ha anya asatọ fjords ya mere ka anyi mata ha. Nke mbu anyi nwere Aha ya bụ Lysefjord, ebe ndịda nke fjords nke ọdịda anyanwụ Norway. Ọ bụ ebe a ma ama ma nwee ebe abụọ ebe mara mma, ebe a ma ama Preikestolen na Kjerag.
A na-esote ya Hardangerfjord, nke dị na ndịda Bergen, ọ bụ akara ngosi mba mara mma n'oge opupu ihe ubi yana ugwu jupụtara na osisi apụl. Ọ nwere n'aka nkebi abụọ, ogwe aka abụọ, ndị ama ama, Eidfjord na Sorfjord, ọ gbatịrị ruo kilomita 179.
El Aurlandsfjord ọ bụkwa ogwe aka nke Sognefjord, warara ma sie ike, ma nwee obodo mara mma a na-akpọ Flam. Traingbọ oloko dị elu na-abịa n'ihi ya ọ bụ ebe njem nleta. Ọ na-agbaso na ndepụta a site na nke na-ejikọta ndepụta nke World Heritage, the Naeroyfjord, ya na ụzọ ya dị warara nke naanị 250 mita n'akụkụ ụfọdụ. O nwere mgbidi ugwu na mmiri mmiri, akwukwo ozi mara mma nke di kilomita iri na asatọ.
Sognefjord bụ 'eze nke fjords'. Ọ bụ nke kachasị ogologo na kilomita 200 na mita 1.308 na omimi ya. O di kwa n'etiti fjords kacha nwee obosara ma nwee otutu ngalaba na-emeghe site na isi.
Seehụ waterfalls e nwekwara Geirangerfjord, Ihe Nketa Worldwa. Ugwu kwụ ọtọ n’akụkụ ya, nke e ji snowflakes chọọ ya mma na ọtụtụ mmiri mmiri chọọ ya mma, ụfọdụ n’ime ha na-ewu ewu dị ka ihe a na-akpọ Smụnna nwanyị asaa, Friaren ma ọ bụ the Bridal Veel.
Maka fjord dị egwu anyị nwere Hjorendfjord. Ọ bụ ebe obere njem gara na nke na-apụ apụ maka ọdịdị ya na obere obodo nta ya. Ọ dị kilomita iri atọ na ise n’ogologo. Fjord ọzọ a maara maka ọdịdị ya bụ Uchenna Onyekwere ebe o nwere ọtụtụ agwaetiti n'ụsọ oké osimiri ya na kwa ugwu ndị na-enwu gbaa n'ihi na ha kwụ ọtọ. E nwere ebe njem nleta atọ a maara nke ọma ebe a: ụzọ ugwu Trollstigen, echiche nke obodo Andalsnes, Rampestreken, na ụzọ mgbago Romsdalseggen.
A fjord ukwuu letara site na njem ụgbọ mmiri bụ Trollfjord na mpaghara Lofoten. Ọ bụ naanị 100 mita na ya kasị warara ebe na-adịchaghị 3 kilomita ogologo. Ihe nkiri Matt Damon, Na-agbada (ebe ndi mmadu na-abuta ihe ntanetiri), ka esere ebe a.
Fjords na ndị ọzọ
Ọ bụghị naanị banyere fjords mana banyere obodo ntà gini di ebe a ebe njem nleta enwere ike ịga leta. Na Obodo Storfjorden Ọ bụ n’ebe dịpụrụ adịpụ ma bụrụ nke ama ama maka anụ ọhịa ya dịka ị pụrụ ịhụ whale na dolphin mgbe ị na-apụ na mmiri. Na oge oyi ọ na-ewu ewu dị ka ebe a na-egwu mmiri ma nwee gondola nke na-aga n'elu ugwu iji nye echiche magburu onwe ya banyere fjord na Sunnmore Alps.
Site na mmiri a na-adịghị ahụkarị nke Hjorundfjord ị nwere ike ịnyagharị na obere ụgbọ mmiri, ọdọ mmiri ndị njem, ugbo ugwu na ime obodo dị jụụ. Isi ihe dị na Norwegian. Seehụ ndị ama ama norwegian stave ụka na mpaghara ọ kacha mma ileta Sognefjord. Na mpaghara enwere ụka ise ochie na nke bara oke uru na nke kacha ochie, bụ Urnes, malitere na narị afọ nke iri na abụọ ma nọrọ n'okpuru nchedo UNESCO.
N'elu anyị kwuru banyere ya Lamgbọ okporo ígwè Flam na obodo nta nke otu aha, na ndagwurugwu Aurlandsfjord. Ọ bụ a ọmarịcha ụgbọ okporo ígwè site tunnels na nkpoda Okirikiri. Ọ na-akwụsị na nsụda mmiri Kjosfossen, na mgbakwunye.
N'aka nke ọzọ, otu n'ime saịtị ndị ahụ, nke a na-ekwu, sitere n'ike mmụọ nsọ ụfọdụ ọdịda nke Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, ihe nkiri Disney, dị na Naeryfjord. Ihe dị obere Obodo GudvangenO doro anya na otu narị mmadụ na-ebi ndụ, ọ bụ ọnụ ụzọ ámá nke ọtụtụ ọgba ndị nwere ike nyochaa.
Anyị na-ekwukwa banyere Akpolo, Prekeistolen, a okwute okwute nke yiri mbara ihu n’elu fjord. Have ga-arịgo elu nwa oge iji rute ya mana ọ bara uru. See hụrụ Ọpụpụ Mgbasa Ozi Na-agaghị Ekwe Omume? Ọfọn, nke a bụ ebe Tom Cruise na-alụ ọgụ Henry Cavill.
Ọ bụrụ na sinima abụghị ihe gị, enwere ike viking akụkọ ihe mere eme? Maka nke ahụ, ọ na-aga obodo nta nke Eidfjord, n'akụkụ mmiri nke Hardangerfjord. Si ebe a ị nwere ike were a mara mma obere ụgbọ oloko na na 50 nkeji esịmde a Ebe a na-eli Viking, na Haereid.
Ebe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ ebe njem nleta ị nwere ike ịga na Norwegian fjords.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Kedu ihe bụ fjords Norwegian?